သင်မသိသေးတဲ့ တစ်နေ့ပန်းသီးတစ်လုံးစားခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများ
November 30, 2020 AuthorLeaveaComment on သင်မသိသေးတဲ့ တစ်နေ့ပန်းသီးတစ်လုံးစားခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများ
သင်မသိသေးတဲ့ တစ်နေ့ပန်းသီးတစ်လုံးစားခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများ ================ ပန်းသီးဟာ အလွယ်တကူစားသုံးနိုင်တဲ့ သစ်သီးဖြစ်သလို ကျန်းမာရေးအတွက်လဲအကျိုးများကြောင်း လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်း က ပညာရှင်တွေ လေ့လာတွေ့ရှိထားပါတယ်။ (1)နှလုံးရောဂါဖြစ်နှုန်းလျော့စေခြင်း – ပန်းသီး မှာ အမျှင်ဓာတ်ပါဝင်မှုများတာကြောင့် မကောင်းတဲ့ကိုလက်စထရောတွေကိုလျော့နည်းစေပါတယ်။ပန်းသီးအသားမှာပါဝင်တဲ့ ပိုလီဖီနော်ဓာတ်ကလဲ သွေးပေါင်ကိုချပေးပါတယ်။ အဲ့အတွက်ကြောင့်နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ ကိုလျော့ကျစေပါတယ်နော်။(2)ဝိတ်ကျချင်ရင်ပန်းသီးတစ်နေ့တစ်လုံးစားပေးပါ- အမျှင်ဓာတ်ကြွယ်ဝသောကြောငိ့ အဆာခံစေပါတယ်။ ursolic acidပါဝင်သဖြင့် အဆီတွေကိုလောင်ကျွမ်းစေသေးတယ်နော်။(3)ဝမ်းချူပ်တာသက်သာစေတယ် – အမျှင်ဓာတ်ကြွယ်ဝပါတယ်ဆိုမှ ဝမ်းချူပ်တာသက်သာပြီပေါ့။ပုံမှန်တော့စားပေးနော်။(4)Asthmaပန်းနာရင်ကျပ်သမားတွေအတွက်လက်တွဲဖော် – ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းတွေပါလို့အဆုတ်ပျက်စီးခြင်းမှကာကွယ်ပေးပါသတဲ့။ (5)ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြော ကောင်းမွန်စေခြင်း -အဆီတိုင်းကိုလင်းဓာတ်ပါဝင်ပြီး ဦးနှောက်ဆဲလ်တွေအတွက်အားပြည့်စေပါတယ်။အသက်ကြီး သူတွေနှင့်အဲလ်ဇိုင်းမားရောဂါမှာ မှတ်ဉာဏ်ချိူ့ယွင်းလာမှုကို ပန်းသီး၁နေ့၁လူံးစားစေပြီးလေ့လာကြည့်ရာ မှတ်ဉာဏ်စွမ်းရည်ပြန်တက်လာကြောင်းတွေ့ရှိထားပါတယ်။(6)ကင်ဆာဖြစ်မှူကျဆင်းစေခြင်း -အမေရိကန်ကင်ဆာအဖွဲ့အစည်းလေ့လာချက်အရ ပန်းသီးစားသုံးသူတွေဟာ ပန်ကရိယကင်ဆာဖြစ်နှုန်းကို ၂၃ရာနှုန်းလျော့ကျစေပါတယ်။ ရင်သားကင်ဆာ အသည်းကင်ဆာ အူကင်ဆာ စအိုကင်ဆာများကိုလဲလျော့ကျစေပါတယ်။(7)ဆီးချိူရောဂါကာကွယ်ခြင်း – ဆီးချိူရောဂါကို ၂၈ရာနှုန်းထိကာကွယ်ပေးပါတယ်။(8)ကိုယ်ခံအားတက်စေခြင်း – ဗီတာမင်စီ ပါဝင်လို့ immune […]
ဆီးပူ ဆီးကျင် ဆီးအောင့် ကျောက်ကပ် ကျောက်တည်သူများ ဆီးလမ်းကြောင်း ကျောက်တည်သူများအတွက် မြန်မာ့ဆေးနည်း
November 30, 2020 AuthorLeaveaComment on ဆီးပူ ဆီးကျင် ဆီးအောင့် ကျောက်ကပ် ကျောက်တည်သူများ ဆီးလမ်းကြောင်း ကျောက်တည်သူများအတွက် မြန်မာ့ဆေးနည်း
ဆီးပူ ဆီးကျင် ဆီးအောင့် ကျောက်ကပ် ကျောက်တည်သူများ ဆီးလမ်းကြောင်း ကျောက်တည်သူများအတွက် မြန်မာ့ဆေးနည်း —————————– ဓါတ်ပုံမှာပါတဲ့ ဆေးပင်ကလေးဟာ လမ်းဘေး သို့မဟုတ် ကွင်းပြင်တွေမှာ ပေါက်ရောက်တတ်ပါတယ်။ အဲဒီအပင်လေးကို ဟင်းနုနွယ်ဆူးပေါက်လို့ ဆေးပညာစသင်ပေးခဲ့တဲ့အဖိုးကပြောပြပါတယ်။သည်အပင်လေးဟာ ဟင်းနုနွယ်မျိုးနွယ်ပါပဲ ဒါပေမဲ့ သူရဲ့ထူးခြားချက်က ဆူးကလေးတွေ ပါနေတာပါ။ကျနော့ကို ဆေးပညာသင်ပေးခဲ့တဲ့ ကျနော့အမေရဲ့အဖေကျနော့အဖိုးဟာ ဆီးပူဆီးအောင့်ဆီးသွေးပါ ဆီးကျောက်တည်တဲ့ လူနာတွေတွေ့တိုင်း သည်ဟင်းနုနွယ်ဆူးပေါက်ပင်တစ်ပင်လုံးကို ရေနဲ့သန့်စင်အောင် ဆေးပြီးဓါးနဲ့နုတ်နုတ်စင်းကာ ရေကို ရေဖလားတစ်ခွက်ခန့် ထည့်ပြီးအိုးတစ်လုံးနဲ့ ကျိုပါတယ်။ဆေးပြုတ်ရည်အဖြစ် ဖန်တီးလိုက်တာပါ။ ပြုတ်ရည်ရပြီဆိုရင် အအေးခံပြီး ပြုတ်ရည်မှာ သကြားခပ်ကာ လူနာကိုသောက်နိုင်သလောက် နည်းနည်းချင်း စတိုက်ပါတယ်။နေ့တိုင်းလည်း ဟင်းနုနွယ်ဆူးပေါက်အပင်သစ်နဲ့ကြိုသောက်ခိုင်းပါတယ်။ ထိုအခါလူနာမှာ ကျောက်ကြောင့်အောင့်ခြင်း ကိုက်ခြင်းနာခြင်းများ သက်သာ၍ ကျောက်များထွက်ကျလာပါတော့သည်။ ကျောက်သေးရင်တော့ အမှုန့်ဖြစ်ကာ ပျော်ကျစေပါတယ်။ဆီးအိမ်ကျောက်ကပ် ဘယ်နေရာမှာပဲကျောက်ရှိရှိသည်ဆေးပင်လေးက ပျောက်ကင်းအောင် အစွမ်းထက်ကုသနိုင်ပါကြောင်း […]
သွေးတိုး၊ ဆီးချိူရှိလို့ ကြောက်စရာမလို
November 30, 2020 AuthorLeaveaComment on သွေးတိုး၊ ဆီးချိူရှိလို့ ကြောက်စရာမလို
သွေးတိုး၊ ဆီးချိူရှိလို့ ကြောက်စရာမလို ——————– ဒီတစ်ခါမှာတော့ စာဖတ်ပရိသတ်တွေကို သွေးတိုး၊ ဆီးချိူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဆေးနည်းလေးပြန် လည်မျှဝေပေးပါမယ်။ ဆေးနည်းကလွယ် ကူသလို မိမိပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်း လွယ်လင့်တစ်ကူရရှိနိုင်သလို ဘေးထွက်ဆိုးကျိူးလည်းမရှိလို့ စမ်းသုံးကြည့်နိုင်ပါတယ်။သွေးတိုး ဆီးချို အမြဲတက်နေတာအတွက် စိတ်မပူပါနဲ့။ ကွမ်းရွက်တစ်ရွက်မှာ ကြက်သွန်ဖြူ (၅) တက် ထည့်ပြီး ညက်အောင် ဝါးစားပြီး မြိုချလိုက်ပါ။ ပြီးရင် ရေအနည်းငယ်သာ သောက်ပါ။ ခဏနေရင် သွေးတိုးဆီးချို အံ့အားသင့်ဖွယ် ကျသွားပါမယ်။နံနက် နေ့လည် ည သုံးကြိမ် သောက်ပေးပါ။ သွေးတိုး ဆီးချို သိပ်မတက်ရင် နံနက် ည နှစ်ကြိမ်သာ သောက်ပေးပါ။ ရက်ရှည် သောက်သွားရင် သွေးတိုးဆီးချိုက bye bye ဆိုပြီးနှုတ်ဆက် ထွက်ပြေးသွားပါ လိမ့်မယ်။ ။ရိုးရိုးအစိမ်းမစားနိုင်သူများ.၊.ကြက်သွန်ဖြူ.၅.မွာ.မီးကင်၍စားနိုင်ပါသည် ။ […]
ခြေစွာနေတဲ့ ဆောက်သမ်တမ်ကို ဒုတိယပိုင်းမှာ Come Back လုပ်ပြီး ဖြုတ်ချလိုက်တဲ့ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်
November 29, 2020 AuthorLeaveaComment on ခြေစွာနေတဲ့ ဆောက်သမ်တမ်ကို ဒုတိယပိုင်းမှာ Come Back လုပ်ပြီး ဖြုတ်ချလိုက်တဲ့ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်
ခြေစွာနေတဲ့ ဆောက်သမ်တမ်ကို ဒုတိယပိုင်းမှာ Come Back လုပ်ပြီး ဖြုတ်ချလိုက်တဲ့ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် ———————- ဆောက်သမ်တန် အသင်းနဲ့ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့ ပွဲစဉ်မှာတော့ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် အသင်းက အဝေးကွင်းကနေ ဒုတိယပိုင်းသွင်းဂိုးတွေနဲ့ အနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ ယူနိုက်တက် တို့ဟာ ပထမပိုင်းမှာ ဂိုးရနိုင်လောက်တဲ့ အပိုင်အခွင့်အရေး‌တွေရရှိခဲ့ပေမယ့် တိုက်စစ်က ဂရင်းဝုဒ် ဖြုန်းတီးခဲ့သလို ဖာနန်ဒက်စ်ရဲ့ ၂ ကြိမ်ဆက် ကန်ချက်ကိုလည်း ဂိုးသမား မက္ကာသီ လက်စွမ်းပြ ကာကွယ်နိုင်ခဲ့လို့ ဦးဆောင်ဂိုးနဲ့ ဝေးကွာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အဲနောက်မှာတော့ ဆောက်သမ်တမ်အသင်းက သွင်းဂိုး ၂ ဂိုးရရှိခဲ့ပြီး ပထမသွင်းဂိုးကတော့ ထောင့်ကန်ဘောက တစ်ဆင့်ရရှိသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဒုတိယသွင်းဂိုးကတော့ အလွတ်တည်ကန်ဘောကနေရရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် အသင်းဟာ ပထမပိုင်း ချေပဂိုးတွေသွင်းနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပဲ ၂ – ၀ နဲ့ ရှုံးနိမ့်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ […]
November 29, 2020 AuthorLeaveaComment on ချောင်းခြောက်ဆိုးခြင်းအတွက် လွယ်ကူသောဆေးနည်း
ချောင်းခြောက်ဆိုးခြင်းအတွက် လွယ်ကူသောဆေးနည်း ——————– အဆုတ်တွင်အပူငုပ်၍ ဖြစ်သည်။ နာတာရှည်အဆုတ် ရောဂါခေါ်မြစ်ခြောက်နာကြောင့် လည်းဖြစ်တတ်ပေသည်။ နံက်စောစော အုန်းစိမ်းရည်သောက်ပြီး ရေချိုးပေးပါ။ အုန်းစိမ်းရည်တွင်ချင်းပါးပါးလှီးပြီးအနည်းငယ်ထည့်၍ မီးဖြင့်ဆူရုံအပူပေးကာနွေးနွေးသောက်ပါ ။ လောက်သေရွက်ပြုတ်ရည်ကိုတစ်နေ့လျှင် မတ်ခွက်တစ်လုံးစာသောက်ပေးပါ ။ မီးကွင်းဂမုန်းရွက်သတ္တုရည်ကိုဆားလှော် အနည်းငယ်ထည့်သောက်ပါ ။ ပြည်ပန်းညိုရွက်ထောင်းပြီးအရည်ညှစ်အကြမ်းပန်းကန်တစ်လုံးစာတွင်ပျားရည် တစ်ဇွန်းစပ်သောက်ပေးပါ။ ကြက်သွန်နီဥကြီး မီးအုံးပြီးပူတုန်းစားလိုက်ပါ။ ရှောက်သီးအရည်၃ဇွန်း၊ ပျားရည်၁ဇွန်း စပ်ပြီးသိန္ဓောဆားအနည်းငယ်ထည့် လျက်ပေးပါ။ သင်္ဘောအဖိုပင်အရွက်ကို မီးမြိုက်ပြီး အတို့အမြုပ်လုပ်စားပါ။ Credit – ဆရာကြည်လွင်မြင့်(မုဒြာ) [unicode] အဆုတျတှငျအပူငုပျ၍ ဖွဈသညျ။ နာတာရှညျအဆုတျ ရောဂါခေါျမွဈခွောကျနာကွောင့ျ လညျးဖွဈတတျပသေညျ။ နံကျစောစော အုနျးစိမျးရညျသောကျပွီး ရခြေိုးပေးပါ။ အုနျးစိမျးရညျတှငျခငြျးပါးပါးလှီးပွီးအနညျးငယျထည့ျ၍ မီးဖွင့ျဆူရုံအပူပေးကာနှေးနှေးသောကျပါ ။ လောကျသရှေကျပွုတျရညျကိုတဈနေ့လြှငျ မတျခှကျတဈလုံးစာသောကျပေးပါ ။ မီးကှငျးဂမုနျးရှကျသတ်တုရညျကိုဆားလှောျ အနညျးငယျထည့ျသောကျပါ ။ ပွညျပနျးညိုရှကျထောငျးပွီးအရညျညှဈအကွမျးပနျးကနျတဈလုံးစာတှငျပြားရညျ တဈဇှနျးစပျသောကျပေးပါ။ ကွကျသှနျနီဥကွီး […]
November 28, 2020 AuthorLeaveaComment on နှစ်နဲ့ချီပြီးကိုက်ခဲ့တဲ့သွား ဒီဆေးနည်းနဲ့မှပဲ သက်သာတော့တယ်
နှစ်နဲ့ချီပြီးကိုက်ခဲ့တဲ့သွား ဒီဆေးနည်းနဲ့မှပဲ သက်သာတော့တယ် ———————– ကြိုတင်ဝန်ခံပါရစေ။ ကျုပ်က ဆရာဝန်မဟုတ်ဘူး။ဝေတနာရှင်ဗျ။ကိုယ့်ရောဂါ ကိုယ့်ဝေတနာကို ကိုယ့်ဖာသာ မှန်းကု ရမ်းကု ဒေါက်တာရမ်းကုလုပ်ရင်းရရှိလာတဲ့အကျိုးကို မျှဝေလိုက်တာ။ဒီလိုဗျ…၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာ ကျုပ်အံသွားတစ်ချောင်းလှုတ်ပြီး မခံမရပ်ကိုက်လွန်းလို့ ဆရာဝန်သွားပြတယ် ။ဆရာဝန်ကသွားရဲ့တန်ဖိုးကိုသိတော့ မနုတ်စေချင်ဘူး စားဆေးပေးပြီးထိန်းလိုက်တယ်။သက်သာသွားတယ်။ဒါပေမယ့် သွားရဲ့ဘေးမှာဖုကလေးလိုဖြစ်ပြီးပြီတည်လာတယ်။ဆရာဝန်ထပ်ပြ ဆေးထပ်ပေး ဒီလိုနဲ့ပဲသံသရာလည်နေတာပေါ့။ပြီတည်တဲ့အခါ သွားဖုံးတင်းပြီး နေထိုင်ရခက်ပေမယ့်ညှစ်ထုတ်လိုက်လို့ပြီထွက်သွားရင် တစ်ပါတ်လောက်နေထိုင်လို့ကောင်းသွားပြန်ရော။ပြီးရင်ပြန်ထွက်။ဆေးကတော့ မနက်တစ်ကြိမ် ညတစ်ကြိမ်နေ့တိုင်းသောက်လာလိုက်တာ ၂၀၁၇မှ၂၀၁၉ခုနှစ်ခုချိန်ထိပဲ။နှစ်နှစ်ပြည့်တော့မယ်။နှစ်ချီကြာလာတော့ ကင်ဆာဘာညာလန့်လာင်္ပြီလေ။ရန်ကုန်ရောက်တော့ လှည်းတန်းသွားဘက်ဆိုင်ရာ ဆရာဝန်နဲ့ဆက်ပြတယ်။ဆရာဝန်က ဓါတ်မှန်ရိုက်စစ်ဆေး အဖြေက ကင်ဆာမဖြစ်သေးဘူးဆိုတော့ စိတ်အေးပြီမို့ဆက်ကုပေါ့။သက်သာသလိုရှိပေမယ့် အနာပြီထွက်တာတော့ ထုံးစံအတိုင်းပဲ။ တင်းပြီလေ။ လူကခတ်ရွတ်ရွတ်ဆိုတော့တွေ့သမျှ လမ်းဘေးအရွက်တွေခူး အရည်ထွက်အောင်ကြိတ် အနာထဲထည့်ပေါ့။တမာရွက်တွေဝါး။တမာခေါက်ငုံ။ဆားရေငုံ မရပါဘူး။တစ်နေ့ ဖုန်းပွတ်ရင်းကျောက်ချဉ်အာနိသင်အကြောင်းပင်စိမ်းရွက်နဲ့ သံပုရာသီးအကြောင်းရေး ထားတာလေးတွေ့လို့ ဖတ်ကြည့်ရင်းအကြံပေါ်လာတာနဲ့ထုံးစံအတိုင်း စမ်းသတ်တာပေါ့။(သွားနဲ့ပါတ်သက်တာတော့မပါပါဘူး)အဲဒီမှာ ကြက်ကန်းဆန်အိုးတိုးတော့တာပဲဗျို့”တစ်ကယ်အံ့သြစရာပါ”နှစ်နဲ့ချီခံစားနေရတဲ့ရောဂါ နှစ်ရက်သုံးရက်အတွင်း အစအနမကျန် ပျောက် ကင်းသွားတယ်။ဆိုရင် ခင်ဗျားတို့ယုံမလား…အံ့သြမလား။ကျုပ် […]
ဆေးလိပ်သောက်သူများ၊ ခံတွင်းနံ့နံသူများ၊ ချောင်းဆိုးနေသူများအတွက် အဆုတ်ကို သန့်ရှင်းပေးနိုင်မယ့် ဟင်းချိူတစ်ခွက်
November 28, 2020 AuthorLeaveaComment on ဆေးလိပ်သောက်သူများ၊ ခံတွင်းနံ့နံသူများ၊ ချောင်းဆိုးနေသူများအတွက် အဆုတ်ကို သန့်ရှင်းပေးနိုင်မယ့် ဟင်းချိူတစ်ခွက်
ဆေးလိပ်သောက်သူများ၊ ခံတွင်းနံ့နံသူများ၊ ချောင်းဆိုးနေသူများအတွက် အဆုတ်ကို သန့်ရှင်းပေးနိုင်မယ့် ဟင်းချိူတစ်ခွက် —————— ဤဟင်းချိုသည် ဆေးလိပ်သောက်သူများ၊ အာပုပ်နံ့နံသူများ၊ ခန္ဓာကိုယ် အပူ များနေသူများ၊ ချောင်းဆိုးနေသူများအတွက် ထိရောက်စွာ အကျိုးပြုနိုင်သည်။လိုအပ်သောပစ္စည်းများ ကန်စွန်းရွက် (၁) Kg( အရိုးကိုပါ အသုံးပြုပါ။) ပျားရည် (၄၀၀) ဂရမ် ရေ (၄)လီတာမျှ ရေကောင်းကောင်းဆန့်သည့် အိုးကြီး (၁)အိုး ပြုလုပ်နည်းမှာ – အထက်ပါပစ္စည်းများ အားလုံးရော၍ မီးမျှင်းမျှင်းနှင့် (၄) နာရီ ကြာတည်ပါ။ အဖတ်များကို စစ်၍ ပုလင်းထဲ ထည့်ပြီး ရေခဲသေတ္တာထဲတွင် (၂-၃)ရက်ထားပါ။ မိသားစု (၁)ဦးချင်း တစ်နေ့(၁)ခွက် သောက်ရပါမည်။ ကန်စွန်းရွက်ဟင်းချိုသောက်ခြင်းဖြင့် အဆုတ်အတွက် ကောင်းသည်ဟု တရုတ်လူမျိုးများက အထူးသဖြင့် ဓလေ့ရိုးရာအဖြစ် သောက်ကြသည်။ အကျိုးသက်ရောက်ပုံများမှာ…(၁) […]
သွားပိုးပေါက်ပျောက်လို သူတွေအတွက် မာလကာရွက်
November 28, 2020 AuthorLeaveaComment on သွားပိုးပေါက်ပျောက်လို သူတွေအတွက် မာလကာရွက်
သွားပိုးပေါက်ပျောက်လို သူတွေအတွက် မာလကာရွက် ——————— ကလေး၊ လူကြီး မည်သည့်အရွယ်မဆို သွားကိုက်တတ်ကြပါတယ်။ ကိုက်ပြီ ဆိုရင်လဲ ညနက်သန်းခေါင် ဖြစ်တတ်ကြတာမို့ ဆေးခန်းသွားဖို့ကလည်း မဖြစ်နိုင်ပြန်။ အလွန်ခံရခက်တဲ့ ဝေဒနာတမျိုးပါ။ဒါပေမဲ့ စိတ်မပူပါနဲ့ သင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ မာလကာပင် တပင်လောက်ရှိရုံနဲ့ အဆင်ပြေသွားမှာပါ။ ပြုလုပ်နည်း -မာလကာရွက် ခပ်ရင့်ရင့် ၁၀ ရွက်လောက်ခူးလိုက်ပါ။ ရေစင်အောင်ဆေးပြီး အိုတလုံးထဲ ထည့် ရေကို မတ်ခွက်နဲ့ တခွက်လောက်လောက်ထည့်ပြီး ပွက်ပွက် ဆူအောင်ပြုတ်လိုက်ပါ။ အဖန်ရေ ရလာပြီဆိုရင် ချနိုင်ပါပြီး။ ခွက်ထဲသို့ အရည်စစ်ထည့်ပါ။ ပြီးရင် အအေးခံထားပါ။ ခပ်နွေးနွေးလေးရလောက်ရင် အာလုတ်ကျင်းပေးပါ။ သွားမကိုက်ရင်တောင် ကိုယ့်မှာ သွားပိုးပေါက်ရှိတယ်ဆိုရင် မကြာမကြာကြိုတင်ပြီး မာလကာရွက်ရည် နဲ့ အာလုတ်ကျင်းပေးခြင်းအား ဖြင့် သွားကိုက်သွားနာ ကင်းဝေးပါလိမ့်မယ်။ (ဆားမထည့်လဲ အဆင်ပြေပါတယ်။) […]
ကလေးတွေကို ဘယ်အရွယ်ကပြီး ဖြည့်စွက်စာတွေ ကျွေးသင့်သလဲ..?
November 28, 2020 AuthorLeaveaComment on ကလေးတွေကို ဘယ်အရွယ်ကပြီး ဖြည့်စွက်စာတွေ ကျွေးသင့်သလဲ..?
ကလေးတွေကို ဘယ်အရွယ်ကပြီး ဖြည့်စွက်စာတွေ ကျွေးသင့်သလဲ..? ———————- သင့်ကလေး ကြီးထွားဖို့နဲ့ ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်ဖို့အတွက် ဖြည့်စွက်စာ ကျွေးခြင်းကလည်း အဓိကကြလှပါတယ်။ ဖြည့်စွက်စာက သင့်ကလေး ဘယ်လောက်ထွားမလဲ၊ ဉာဏ်ရည် ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲ ဆုံးဖြတ်ပေးသလို ကြီးလာတဲ့ အခါ အစာဂျီးမများတတ်အောင် ပုံသွင်းပေးနိုင်ပါတယ်နော်။ဒါကြောင့် ကလေးတွေကို ဘယ်အရွယ်ကပြီး ဖြည့်စွက်စာတွေ ကျွေးသင့်တယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်း လမ်းညွှန်ဖော် ပြပေး လိုက်ပါတယ်။ ဘယ် အချိန်စရမလဲ ဆိုရင်တော့ ကျန်းမာရေးပညာရှင်တွေ စံပြုသတ်မှတ်ထားတဲ့ အရွယ်ကတော့ ကလေး အ သက် ၆လ ဝန်းကျင်ဆို စကျွေးရပါမယ်။ ဒီလိုကျွေးနေတဲ့ အချိန်မှာ မိခင်နို့ (သို့) ဖော်မြူလာ တိုက်နေကျကို ဆက်တိုက်ပါ။ ၆ လမှာ ဘာကြောင့်စဖို့လို့အပ်သလဲဆိုရင် အောက်ပါ အချက် ၂ ချက်ကြောင့် […]